China Kutonhodza Jaketi Kugadzira uye Fekitori |Yuanfang
L30 / 40 / murume wepakati kumhanya dizeli injini inotonhorera yemvura bhachi, zvinhu gt400-18, chikwata uremu 250kg.
Marine injini dzedhiziri, dzakadai seMAN, DAIHATSU, nezvimwe.
1. Kureba kwenguva yakareba sei kushandiswa kwechiumbwa chako?Nzira yekuzvichengetedza zuva nezuva?Ndeipi kugona kwekugadzira kweseti yega yega mold?
Zvinoenderana neyakasiyana zvigadzirwa, iyo mold nguva yekushandisa inowanzo 3-8 makore.Kuchengetedza kwezuva nezuva kunoitwa maererano nezvinodiwa zvekugadzirisa mold.Izvo zvikamu zvisina njodzi zvinotariswa nguva imwe neimwe, uye zvikamu zvisina kukodzera mold zvinotsiviwa nenguva.Iko kukwanisa kugadzira kwega yega mold ndeye 10,000-200,000.
2. Ndeipi nzira yekugadzira yekambani yako?
Maodha anotyaira kugadzirwa, zvinhu zvinotumirwa kunze, kugadzirwa kunoitwa, maitiro ese anodzorwa mhando, kuchengetwa, uye kutumirwa.
3. Ko kambani yako yakajairika chigadzirwa chekutungamira nguva inotora nguva yakareba sei?
Ronga kuburitsa kubva pazuva 1 kusvika kumwedzi mitatu
4. Ko kambani yako ine hushoma hwekuraira huwandu hwezvigadzirwa zvako?Kana zvakadaro, ndeupi huwandu hweodha hudiki?
Pane hushoma hwehuwandu hwekuodha, uye hushoma igaba rimwe chete.
5. Ndeipi huwandu hwese hwekugadzira huwandu hwekambani yako?
6. Kambani yako yakakura sei?Chii chinonzi year output value?
100 maeka ekugadzirwa kwenyika chirimwa, 150 miriyoni yuan muzvinhu zvakagadziriswa, kutengeswa kwepagore kwe200 miriyoni yuan, vangangoita mazana matatu vashandi, uye vanopfuura makumi matanhatu einjiniya nevashandi vehunyanzvi.
Zvakapfuura: Supercharger Shell, Pombi Shell
Zvinotevera: Copper Phosphorus Silver Electrode 2% Silve Rod /5% Silve Rod /15% Silve Rod